चलचित्र escape हो वा confrontation ? – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
चलचित्र escape हो वा confrontation ?
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७८, शनिबार १५:११
चलचित्र escape हो वा confrontation ? यो प्रश्नको सही उत्तर छैन । मेरो भोगाइमा वास्तविकता बोरिङ्ग हुन्छ । र, त्यसभन्दा बढी खतरनाक हुन्छ । वास्तविकता बोकेका चलचित्रले हाम्रा मान्यताहरूलाई भत्काउने सम्भावना राख्छन् । हामीलाई विचलित बनाउन सक्छन् । यस कारण यी कम हेरिन्छन् । तर यिनै चलचित्र मानिसको conscience मा लामो समयसम्म बसिरहन्छन् ।
अघिल्लो लकडाउनमा हेरेको Happiness (1998) यस्तै एउटा चलचित्र थियो । फिल्म यथार्थको धरातलमा उभिएको थियो । पात्रहरू खुसी हुन चाहन्थे । उनीहरूका आकाङ्क्षाहरू त्यति ठुला पनि थिएनन् । तर ती असामाजिक थिए, आपराधिक थिए । समाजको अवधारणाभित्र हामी खुसी हुन सक्दैनौँ भने के हामी असामाजिक हुनसक्छाैँ ? फिल्मको अन्वेषण यही प्रश्नमा थियो । फिल्मले नराम्ररी बिथोलेको थियो ।
आज फेरी अर्को फिल्मले बिथोलेको छ ।
जिन्दगी कहिल्यै पनि सहज बन्दैन । वर्तमान सधैँ कष्टकर नै हुन्छ । समय बित्दै जाँदा हामीलाई विगतले दुखाउन छोड्छ । हामी विगतलाई रङ्गिन चस्मा लगाएर हेर्छौँ । यस कारण बाल्यकालमा फर्कन हामीलाई रहर लाग्छ । सानो हुन मन लाग्छ ।
सानो हुनु भनेको दुःख सानो हुनु हैन । Welcome to the Dollhouse हेरेपछि फेरि स्मरण भयो । तितो औषधी निलेजस्तो भयो । Happiness का निर्देशक टड् सलोन्जले लेखन/निर्देशन गरेको यो फिल्म Happiness जत्तिकै Depressing छ । सानोमा हामी धेरै अरूका अपेक्षाहरूसँग जुध्छौँ । अरूका मापदण्डहरूबाट दाँजिन्छाैँ । हामीलाई ठुलाहरूको ध्यान चाहिन्छ । साथीहरूको approval चाहिन्छ । हुर्कँदै गर्दा अरू मान्छे मनपर्न थाल्छन् । अरूले मनपराउन लाग्छ । कहिलेकाहीँ यी अपेक्षाहरूका कारण हामी समय अगावै हुर्कन बाध्य उङ्छौँ । मन नलागेको कुरा गर्न बाध्य उङ्छौँ ।
फिल्म यी यस्तै कुराहरूबाट गुज्रिरहेकी किशोरीको कथा हो । मिडल स्कुलमा पढिरहेकी Dawn Weiner जो स्कुलमा हेपिन्छे, घरमा बेवास्ता गरिन्छे, प्रेममा अपरिपक्व ठहरिन्छे । उ दुनियाँमा आफ्नो ठाउँ खोजिरहेकीछे । घरमा, स्कुलमा, प्रेममा उ कतैपनि अट्न सकिरहेकीछैन । नेपथ्यमा बसेर दुनियारुपी नाटक नियालिरहेकी Dawn आफ्नो भूमिका निभाउन सकिरहेकीछैन ।
फिल्म वास्तविकता देखाउने क्रममा कतैपनि लुलो भएको छैन । बालिकाको कथा हो भनेर कतैपनि कोमल भैदिएकोछैन । फिल्ममा कमेडी छ तर त्यो हँसाउनको लागि आएको छैन । फिल्मले रुवाउन सक्छ तर दर्शकलाई रोउ भन्दैन । गुडियाको घर र एउटी मिस्फिट गुडियाको कथा हो यो । गुडिया जो मिसिन चाहन्छे । जता भएपनि कतै अट्न चाहन्छे ।
कविता : काठमाडौँ , सपना र म !
माधव- झलनाथ समुह सामुहिक राजीनामाको तयारीमा